Malunga - Cloud Library
Ekhaya - Malunga
Malunga iCloud Library
iMessenger International inengqwalasela jikelele abayinikezelayo besenza ezizixhobo zifumaneke kwaba fundisi nenkokeli nokuba baphi nokuba isimo sabo sezemali sinjani. iCloud Library yenzelwa le njongo. Isebenza njenge gridi ye intanethi yosasazo evumela izixhobo ezitolikiweyo zibukelwe zikutshelwe mahala.
Injomgo yethu yeyokuba senze ezizixhobo zifumaneke ngawo wonke amalwimi amakhulu, ngokoke siseka ukukwazi ukuba sifikelele ngapha kwe 98% yabemi basemhlabeni. iCloud Library yenye yeavenyu yoku phumeza le njongo. Ngoba, uyabuza? Ngokuba isixhobo se intanethi singa phinda phindeka sihambe ngokukhawuleza kakhulu kune sixhobo esibambekayo. Siyathemba ukuba uzakuvuyela amava wakho emafini.
uYesu wasithuma ukuba singashumayeli nje ivangeli, kodwa ukuba siphuhlise abafundi. Le miyalezo izakunceda ukuba ubengumfundi kaKristu. Sityale kuqeqesho lakho ngokuba sokholwa kuwe nokukwazi kwakho, ngofefe likaThixo, kuba senze inguqu ebomini bakho be mpembelelo. uThixo ubeke ubukhulu phakathi kwakho, ufuna ukukwazi ngokusondeleyo. Ezizixhobo zizakunceda ukufumanisa, ulwalamano lobuqu elisondeleneyo no Thixo. Njengokuba ukhula ku lwalamano lakho no Thixo, uzakuguqulwa ngamandla weLizwi Lakhe.
uThixo wakudalela injongo eyodwa kwi sipho ne mpembelelo yakho. Siyakukhuthaza ukuba ukhangele inzaliseko yento yonke uThixo akubekele yona. Umthandazo wethu ngowokuba ezizixhobo zikuphuhlise ku hambo lakho loko kufunyanwayo.
Iintsikelelo kuwe nezakho,
John no Lisa Bevere
Iyavutha intliziyo yakho ukuba ubone izixhobo ezitshintsha-ubomu zisasazwe umhlaba jikelele? Ukuba unomdla wokusixhasa kumsebenzi we Cloud Library, sicela uqhagamshele getinvolved@cloudlibrary.org. Sikubulela ngaphambili ngomthandazo nenkxaso yakho!